Ingulube ihamba ne-orange | Ukupheka Kwekhishi
Ingulube ye-orange ihamba
UToñy Torres | | Ukupheka kukaKhisimusi
Ngokufika kukaKhisimusi nokusondela kwamadina nokudla okukhethekile ngalezi zinsuku, ababungazi baseshweni eliphelele lemenyu ephelele. Uma lokhu kuyindaba yakho futhi kulo Khisimusi uthola abantu ekhaya, lo umqondo olula kakhulu ukuwulungiselela. Le ngulube yethenda enolintshi, ilungiswe ebhodweni elisheshayo, liphuma linamanzi futhi linokunambitheka okumangazayo futhi uma lokho bekunganele, isidlo esonga kakhulu.
Ingulube loin ingenye yezingxenye ezinciphile zalesi silwane, ngakho-ke amakholori amancane namafutha amancane. Njengokuhlobisa, ungalungisa imifino eyosiwe, amanye amakhowe noma amanye amazambane abhakiwe. Noma ikuphi ukuhambisana kuphelele kulesi sithando esimnandi se-orange yengulube. Siyazilungiselela futhi siqale, ake singene ebhizinisini!
Author: UToñy Torres
Igumbi lasekhishini: Spanish
Uhlobo lweresiphi: Ukudla
Ingcezu ephelele yengulube ishiya cishe u-1 k
2 amawolintshi ejusi
1 ingilazi yewayini elimhlophe elimhlophe, noma i-sherry wine
2 wezipuni ibhotela
3 wezipuni ka-olive olive oyintombi
1 isipuni sikashukela onsundu
Okokuqala sizokuhlanza ucezu lwenyama kahle, sigeze ngamanzi abandayo bese somile ngephepha lokumunca.
Isizini ucezu lwengalo kahle, ngezandla zethu siyaqinisekisa ukuthi siyisabalalisa kahle kulo lonke ucezu.
Sibeka ibhodwe emlilweni bese sengeza izipuni ezimbili zebhotela nezipuni ezintathu zamafutha omnqumo.
Uma amanoni eshisa, engeza inyama bese uqinisa nhlangothi zombili.
Uma ingulube isinsundu ngegolide, siyayisusa bese siyayibeka.
Manje, siqunqa u-anyanisi bese siwufaka emlilweni ophakathi ebhodweni elilodwa.
Lapho u-anyanisi esekulungele, sibeka ithenda yengulube futhi.
Cindezela amawolintshi bese ufaka ijusi oyitholile ebhodweni.
Sifaka nengilazi yewayini elimnandi noma i-sherry.
Siyalivala ibhodwe futhi uma sekuqala ukuphuma umusi, mawupheke cishe imizuzu eyi-18 noma engama-20.
Ngemuva kwalesi sikhathi, sisusa ibhodwe emlilweni bese siyaliyeka liphinde liphume kahle lonke umusi.
Lapho sikwazi ukuvula ibhodwe, susa inyama bese ubeka.
Sichoboza isosi etholakele bese siya epanini.
I-sauce izoba uketshezi kakhulu, ngakho-ke kuzodingeka sinciphise.
Sichitha isipuni se-cornstarch emanzini abandayo bese siyifaka ku-sauce.
Siphinde sibeke isipuni sikashukela onsundu futhi siyeke sinciphise ukushisa okuphansi kuze kube yilapho usoso ulula kodwa ungaguquguquki.
Uma inyama isifudumele, sisika izingcezu ezicijile ngomunwe bese sifaka usoso.
Khonza ushise kakhulu ukujabulela ngokugcwele lokhu kudla okumnandi
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izikhathi ezikhethekile » Ukupheka kukaKhisimusi » Ingulube ye-orange ihamba